विदेश पठाउने र काम नलगाउने म्यानपवारलाई के गर्नुपर्छ ?
Tue, Mar 20, 2018 | 08:05:27 NST
11:36 AM (6 months ago)
प्रश्नः विदेश पठाउने र काम नलगाउने म्यानपवारलाई के गर्नुपर्छ ?
उत्तरः मोहन अधिकारी, निर्देशक वैदेशिक रोजगार विभाग - इजाजत प्राप्त म्यानपवार कम्पनीबाट विदेश गएको छ र विदेशमा काम पाएन भने त्यो मान्छेलाई फर्काएर ल्याउने काम म्यानपवार कम्पनीकै हो। जाँदा र फर्किंदा लागेको खर्च त्यो म्यानपवार कम्पनीलाई तिराउने काम वैदेशिक रोजगार विभागले गर्छ र गर्दै पनि आएको छ।
कम्पनी बन्द भएर करार अवधि नसकी नेपाल फर्काएमा के कस्तो सहायता पाइन्छ ?